Pilato ne Herode Huu sɛ Asɛm Nni Yesu Ho | Yesu Asetena
Pilato ne Herode Huu sɛ Asɛm Nni Yesu Ho
PILATO NE HERODE HWEHWƐƐ YESU ASƐM MU
Yesu amfa ansie Pilato sɛ ɔyɛ ɔhene. Nanso ɔmaa no huu sɛ n’Ahenni no ne Roma ahenni no mpere hwee. Yesu kaa sɛ: “M’ahennie mfiri wiase. Sɛ m’ahennie firi wiase a, anka m’asomfoɔ bɛko na wɔamfa me amma Yudafoɔ no. Nanso sɛdeɛ ɛteɛ no, m’ahennie mfiri ha.” (Yohane 18:36) Enti Yesu wɔ Ahenni, nanso ɛmfiri wiase.
Pilato amfa asɛm no anso hɔ ara. Ɔbisaa Yesu sɛ: “Ɛnneɛ na woyɛ ɔhene?” Yesu maa Pilato huu sɛ nea ɔkae no, ɔmmoa. Ɔkaa sɛ: “Wo ara na woreka sɛ meyɛ ɔhene. Yei nti na wɔwoo me, na yei nti na mebaa wiase, sɛ merebɛdi nokorɛ no ho adanseɛ. Obiara a ɔwɔ nokorɛ no afã no tie me nne.”—Yohane 18:37.
Ná Yesu adi kan aka akyerɛ Toma sɛ: “Mene ɛkwan no ne nokorɛ no ne nkwa.” Afei na Yesu rema Pilato nso ate sɛ ɔbaa asase so sɛ ɔrebɛdi “nokorɛ no” ho adanse; saa nokorɛ no fa Yesu Ahenni ho. Ná Yesu awe ahinam so sɛ owuo mu koraa a ɔbɛdi nokorɛ no ho adanse. Pilato bisaa no sɛ: “Ɛdeɛn ne nokorɛ?” Nanso wantwɛn annye ho mmuaeɛ, efisɛ na ɛyɛ no sɛ nea wate no ara dɔɔso; ɔbɛtumi agyina so abua asɛm no.—Yohane 14:6; 18:38.
Ná nkurɔfo gu abɔnten hɔ, enti Pilato san kɔɔ hɔ. Saa bere no, ɛbɛyɛ sɛ na Yesu gyina ne nkyɛn, na Pilato ka kyerɛɛ asɔfo mpanimfoɔ no ne nkurɔfo no sɛ: “Menhunu bɔne biara wɔ ɔbarima yi ho.” Asɛm no maa nkurɔfo no bo fui, na wɔkaa sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛ wɔ Yudea nyinaa de hwanyan nnipa no, ɔfirii aseɛ mpo firii Galilea na ɔde abɛduru ha.”—Luka 23:4, 5.
Ná Yudafo no asi wɔn bo sɛ nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ no, ɛno ara na wɔbɛyɛ, na ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛɛ Pilato nwonwa. Saa bere no nyinaa na asɔfo no ne mpanimfoɔ no reteateam, na Pilato bisaa Yesu sɛ: “Enti wonte nsɛm bebrebe a wɔreka gu wo soɔ yi?” (Mateo 27:13) Yesu anka hwee. Pilato hwɛ sɛnea nkurɔfo atu wɔn ano agu Yesu so a ɔnka hwee no a, na ɛyɛ no nwonwa.
Bere a Yudafo no kaa sɛ Yesu ‘fii ase wɔ Galilea’ no, Pilato huu sɛ Yesu fi Galilea. Enti ɛyɛɛ no sɛ wanya kwan a ɔbɛfa so ayi ne nsa afiri asɛm no mu. Herode Antipa (Herode Ɔkɛseɛ no ba) na na ɔdi Galilea mantam so, na bere a Twam afahyɛ no rekɔ so no, na ɔwɔ Yerusalem. Enti Pilato de Yesu kɔmaa Herode. Herode yi ara na ɔmaa wɔtwaa Yohane Suboni ti. Akyiri yi a Herode tee sɛ Yesu reyɛ anwonwade no, ɛyɛɛ no sɛ gyama Yohane na anyane afiri awufo mu.—Luka 9:7-9.
Herode tee sɛ wɔde Yesu rebrɛ no no, n’ani gyee paa. Hu a na ɔpɛ sɛ ɔhu Yesu no, ɛnyɛ sɛ na ɔpɛ sɛ ɔboa no anaasɛ ɔhwehwɛ nokware a ɛwɔ n’asɛm no mu. Nea ɛte ara ne sɛ, na “ɔpɛ sɛ [Yesu yɛ] sɛnkyerɛnne bi ma no hunu.” (Luka 23:8) Nanso Yesu anyɛ sɛnkyerɛnne biara ankyerɛ Herode. Bere a Herode bisabisaa no nsɛm mpo, wammua no. Ɛbaa saa no, Herode ne n’asraafo nyinaa dii Yesu ho “agorɔ.” (Luka 23:11) Wɔde atade tenten fɛfɛ bi hyɛɛ no dii ne ho fɛw. Afei Herode san maa wɔde Yesu kɔmaa Pilato. Ná Herode ne Pilato ani nhyia koraa, nanso Yesu asɛm no nti wɔbɛyɛɛ nnamfo.
Bere a Yesu kɔduu Pilato hɔ no, Pilato frɛɛ asɔfo mpanimfoɔ ne Yudafo mpanimfoɔ ne wɔn a wɔka wɔn ho no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mehwehwɛɛ n’asɛm mu mo anim nanso manhunu nnyinasoɔ biara wɔ deɛ mode bɔɔ onipa yi soboɔ no mu. Nokorɛm no, Herode nso anhunu bi, na ɔsan de no brɛɛ yɛn; na hwɛ! ɔnyɛɛ biribiara a ɛsɛ owuo. Enti mɛtwe n’aso na magyaa no.”—Luka 23:14-16.
Yesu a asɔfo no de no kɔmaa Pilato no, Pilato huu sɛ ɛyɛ ɔtanhunu ara kwa. Bere a Pilato gu so rehwehwɛ kwan a ɔbɛfa so agyae Yesu no, ɔnyaa nkra bi a anka ɛsɛ sɛ ɛboa no. Ɔte atemmu adwa so no, ne yere de nkra brɛɛ no sɛ: “Mfa wo ho nnye onipa tenenee yi asɛm mu koraa, na ne nti mahunu amane pii wɔ daeɛ mu nnɛ.” Ɛbɛyɛ sɛ Onyankopɔn na ɔmaa ɔsoo saa dae no.—Mateo 27:19.
Ná Pilato nim paa sɛ ɔbarima no ho nni asɛm, enti ɛsɛ sɛ ɔgyaa no. Nanso na aka kwan a ɔbɛfa so agyaa no.
Bere a Pilato bisaa Yesu sɛ ɔyɛ ɔhene no, ɛkwan bɛn na Yesu faa so kaa “nokorɛ no” kyerɛɛ no?
Dɛn na Pilato ka faa Yesu ho? Dɛn na nkurɔfo no yɛe? Dɛn na Pilato nso yɛe?
Adɛn nti na Herode Antipa huu Yesu no, n’ani gyee? Dɛn na ɔde yɛɛ Yesu?
Adɛn nti na na Pilato pɛ sɛ ɔgyaa Yesu?